Yintoni ityala lemiboniso bhanyabhanya kuJohn Alvin | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Yintoni i-Hollywood cinema emtyala uJohn Alvin kunye nemifanekiso yakhe yemifanekiso bhanyabhanya
Kumashumi eminyaka adlulileyo Kwakufuneka imizekeliso ephezulu Ukubonisa le mifanekiso yeefilimu zaseHollywood kwaye phakathi kwabo bazobi sifumana isiqu sikaStruzan okanye uRichard Amsel.
Ezi zikhathalele bonisa loo maphupha kunye namabali, apho sikwafumana uJohn Alvin njengoyena uzise ezinye iipowusta ezikumgangatho obalaseleyo ukuhlangabezana nomlingisi weBlade Runner okanye umfokazi owathi "ET, indlu yam, umnxeba."
IGremlins, INkosi yeNgonyama, uBuhle kunye neRhamncwa, iMbaleki yeBlade, Umbala oMfusa, i-ET yangaphandle, iiGoony, iMermaid encinci, uKoyikwa eKapa okanye uFrankenstein omncinci zezi ezinye zeefilimu ezingenakubalwa azibonisileyo kwaye sele sidlule kwi-retina yethu xa siye kwindawo ethile sayokuzibona kwimuvi kwiminyaka eyadlulayo.
Ukuba umntu ubuyela umva kuzo zonke iifilimu azibonisileyo, umntu angamangaliswa ngumzobi, owayengazi igama lakhe, Kubaluleke kakhulu ukugxininisa umbono Ngubani owafumana ezo movie ebomini bethu, okanye oko kubizwa ngokuba yinkcubeko ethandwayo.
Ngaphezulu kweminyaka engama-25 emqolo kangangokuba ngo-2008 wasishiya eneminyaka engama-59. Indlela yokwenza imemori yokuthanda ukubaluleka kwebrashi yakho kunye nomsebenzi wakho wobugcisa.
Umsebenzi ka-Alvin Kukwiindawo ezahlukeneyo zobugcisa zaseUnited States Apho iziqwenga zakhe, imizobo kunye nohlelo olunomda lwalo msebenzi umangalisayo apho kubonakala khona igama elithi "cinema".
Ngale nto ndizama ukugxininisa loo nto ngasemva kwabo badlali badumileyo nabalawuli, kukho iqela lemveliso elilelo livumela ukuba umzi-mveliso wamaphupha waseHollywood uqhubeke ukhuthaze naphina apho kukhutshwa khona iifilimu zabo.
Omnye umzobi kulowo unetyala elikhulu, kodwa kwi-Star Wars iphela, McQuarrie.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Yintoni i-Hollywood cinema emtyala uJohn Alvin kunye nemifanekiso yakhe yemifanekiso bhanyabhanya
Iplanethi engaqhelekanga yamatye kunye nezityalo zeCaramel nguDavid Brodeur
I-BatMan: IJoke yokubulala ifumana umlinganiso we-R